Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo Dad Rayid ah Dil iyo Dhaawac Muqdisho ugu Geystay | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo Dad Rayid ah Dil iyo Dhaawac Muqdisho ugu...
Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo Dad Rayid ah Dil iyo Dhaawac Muqdisho ugu Geystay
Dhawaan ayaa dowladda Soomaaliya soo roktay bandow habeenkii ah kaas oo ka bilaabnaya 8da habeenimo ilaa 5ta Subaxnimo kaas oo ay sheegtay in ay ku xakameyneyso faafida cudurka Coronavirus ayaa ay ku samesay bandowka waka badalis bilashada bisha barakeysan ee Ramadaanka.
Bandowka bisha ramadaan ayaa laga dhigay 7da fiidnimo ilaa 5ta subaxnimo ayaa xalay oo aheyd habeenkii 1aad ee ramadaan ayaa dadweyne careysan ay banaan bax rabshado wata ka bilaabeen agagaarka Isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho, kaddib markii askari ka tirsan ciidanka booliska uu qof rayid ah dilay, qof kalena dhaawacay.
Banaan baxayaasha oo ka careysan dilka wiilka dhalinyarada ah iyo dhaawaca qofka kale ayaa taayaro ku gubay inta dhaxeysa Isgoyska Jubba iyo dugsiga Bartamaha.
Dilka ayaa goobta ka dhacay abaarihii xilligii Bandowga ee dowladda ku soo rogtay Muqdisho ee 7-da Fiidnimo, kaddib markii kaga soo hormariyay saacad.
Askariga dilka geystay ayaa ka tirsan Ciidanka Booliska, waxaana la sheegay inuu ku sugnaa barta koontaroolka ee Ciidamada Booliska ku hubiyaan gaadiidka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labada qof ee dilka iyo dhaawac loo geystay ay ahaayeen wiil iyo gabar degenaa agagaarka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta, kuwaasoo banaanka fadhiyay, waxaana ay ka dhega adeegeen amarka uu askariga siiyay ee ahaa inay xaroodaan maadaama xilliga bandowga ahaa.
Shacabka Muqdisho ayaa walwal xoogan ka muujiyay xilliga dowladda soo rogtay Bandowga ee bisha Ramadaan, maadaama 7-da Fiidnimo ay jiraan dad goob kale ka afura ama maqaayado, sidaasna Bandowga u sameynayo, isla markaana salaada cishaha iyo taraawiixda uu saameyn ku yeelanayo.